Sunday July 30, 2017 - 06:14:34 in Articles by Super Admin
Xildhibaanadda ayaa xalay Mooshin ka geeyay Wasiir Xoosh, waxaana saxiixay Mooshinka 60 Xildhibaan , taasoo micnaheedu yahay in ka badan intii xukuumada ka keeni kartay codka kalsooni kala noqoshada!
Codka kalsoonida in Xukuumada lagala noqdo waxaa soo Jeedin kara 55 Xildhibaan.
Ra’isulwasaare Kheyre ayaa markii uu maqlay in abaabulkaas socdo wuxuu wacay Wasiir Xoosh, wuxuuna ku yiri soo orod nimankaan qodob dastuuri ah ayay kuu cuskanayaa hadaad maqnaatee!
Qodobka 69aad, Faqradiisa 2aad, Xarafkiisa (C) ee awoodaha Golaha Shacabka Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dhigaya U-yeerida Ra’iisul Wasaaraha, Xubnaha Golaha Wasiirada, Gudoomiyeyaasha Gudiyada Qaranka iyo Xaafiisyada Madaxa Banaan. Mas’uul kasta oo u hogaansami waaya u-yeerida, wuxuu Golaha Shacabku awood u leeyahay inuu dib-u-eegid ku sameeyo xilkiisa.
Wasiir Xoosh oo garwaaqsaday qodobka dastuurigga ayaa saakay diyaarad Nairobi ka raacay,wuxuuna ku wajahan yahay Nairobi.
Xildhibaanadda Mooshinka ka geeyay ayaa sheegay iney saakay su’aalo weeydiin doonaan , haddii su'aalahoodda ay ku qanci waayaan qaabka Wasiirka uga jawaabana waxaa cod loo qaadi doonaa ,oo cod la gelinayaa in shaqadda laga eryo.
Dimbigga ugu weyn ee Wasiir Cabdi Xoosh la filaayo in shaqadda looga eryo wuxuu yahay inuu gudoonka barlamaanka caayay intii uusan u dhoofin Nairobi.
Sikastaba ha ahaatee, Xilka eryidda Wasiir Xoosh waxeey fariin adag u noqon doontaa Ra’isulwasaare Kheyre.